Storekeeper | Pretty Paragon Textile Co., Ltd. ﻿
We offer •	Male(2)posts
Work location No. 3, Sakawar Street, Aye Yeik Mon Housing, Hlaing Township.
•	Good Personality, Communication ကောင်းမွန်ရမည်။ •	ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ဆောင်ရွက်တတ်ရမည်။ •	လူမှု့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။ •	ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမ� ...
•	Good Personality, Communication ကောင်းမွန်ရမည်။ •	မိမိအဖွဲ့အစည်းအား ကောင်းမွန်စွာ စီမံအုပ်ချုပ်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ဆောင်ရွက်တတ်ရမည်။ •	လူမှု့ဆက်ဆံရေးကောင်းမ ...
•	သွက်လက်၍ အလုပ်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသား၍ အကျင့်စာရိတ္တ ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	၂၂မိုင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Good Personality, Communication ကောင်းမွန်ရမည်။ •	ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ဆောင်ရွက်တတ်ရမည်။ •	လူမှု့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ရမည်။
• ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်၍ အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်
• လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး Team Work ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ • ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
Storekeeper Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Pretty Paragon Textile Co., Ltd Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs Storekeeper Jobs in Myanmar, jobs in Yangon